April 2017 - Myanmar News Plus
စာကြမ်းပိုး မိန်းကလေး များကို ချစ်သူ အဖြစ် ရွေးချယ်သင့်သည် အချက်(၈)ချက်
သင် ဘ၀ လက်တွဲဖော်အဖြစ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ဆံပင်က ဘယ်လောက်ရှည်နေတာ၊သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်လောက်ဖြောင့်တာ၊သူက ဘာဘွဲ့တွေရထားတာ ဆိုတဲ့အရာတွေကို ခဏလောက်မေ့လိုက်ပါ။
ခပ်မိုက်မိုက် ပိုစ့် တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ်
အခြားသူ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့အခါမှာ ခပ်မိုက်မိုက်ပိုစ့်လေးတွေနဲ့ ပုံကောင်းကောင်းထွက်စေဖို့ ဘယ်လို ပဲပေးရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အမာရွတ် များကို တစ်လ အတွင်း ဖယ်ရှားနည်း
ခန္ဓာကိုယ် ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒဏ်ရာ အမာရွတ် များကို ဖုံးဖိနေရတာကြောင့် မကြာခဏစိတ်ညစ်နေရပါတယ်။ အမာရွတ်ပျောက် လိမ်းဆေးအချို့ကို သုံးစွဲခဲ့ဖူးပေမယ့် သိပ်ပြီး လျင်မြန်ထိရောက်မှု မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်လေးကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
2017 ရဲ့ ယောကျာ်း မာယာ ၉ သွယ်
န်းမတွေပဲ မာယာဆိုတာ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး . ယောက်ကျာ်းတွေမှာလဲ မာယာတွေ ရှိပါတယ် . ရှေးကျမ်းဂန်များအလိုအရဆိုရင်တော့ ယောက်ကျာ်း မာယာ ၉ မျိုးတိတိရှိပါတယ် . ဒီ မာယာ ၉ မျိုးတွေကတော့…..
ဓမ္မတာ ဖြစ်စဉ် ချစ်တင်းနှော တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိကောင်းစရာ
စုံတွဲတော်တော်များများဟာ ဓမ္မတာဖြစ်နေစဉ်အတော်အတွင်းမှာ ချစ်တင်းနှောခြင်းကို လုံးဝတားမြစ် ထားတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းမတွေဟာလည်း ဓမ္မတာဖြစ်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာ သတိထားပြီးနေတတ် ကြပါတယ်။သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တင်ပါး ပုံသဏ္ဍန် (၅) မျိုး ..!
နယူးယောက်ခ်က ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီ မက်သရူး ဆူလ်မန်က ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမျိုးသမီးတွေအားလုံးရဲ့ တင်ပါးတွေမှာ အမျိုးအစား (၅) မျိုးသာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ထည်လုံးကို ဝါးစားလို့ရမယ့် သတို့သမီး ဝတ်စုံ
သတို့သမီး ဝတ်စုံတွေကို ဒီဇိုင်နာတွေက ပိုမိုလှသထက်လှ၊ ဆန်းသထက်ဆန်းအောင် အမျိုးမျိုး ဖန်တီးချုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်…76 ချက်ထဲက ဘယ်နှစ်ချက် သင် လုပ်နိုင်သလဲ ???
၁။ facebook password ကို သူမကို ပြောပြပါ…
လိင်ဆွဲအားပြင်းဝတ်စုံဖြင့် ဂီတထူးချွန်ဆုပေးပွဲ တက်လာသည့် ဂျနီဖာလိုပက်
နာမည်ကျော် အဆိုတော်တဦးဖြစ်တဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် ဟာ ဖလော်ရီဒါမှာကျင်းပတဲ့ ဘီလ်ဘုတ်လက်တင် ဂီတထူးချွန်ဆုပေးပွဲကို ထူးခြားတဲ့ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်ဝတ်စုံနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။